Muqdisho oo todobaadka soo socda geli doonta xaalado siyaasadeed iyo Musharaxiinta mucaaradka... -
Home News Muqdisho oo todobaadka soo socda geli doonta xaalado siyaasadeed iyo Musharaxiinta mucaaradka…
Labada maalin ee soo socota inta badan Musharaxiinta Madaxweynaha ee safarada dibadda ku maqan ayaa la filayaa inay Muqdisho soo wada galaan, iyadoo todobaadka soo socda Muqdisho geli doonto xaalad siyaasadeed iyo shirar ay yeelanayaan Musharaxiinta Madaxweynaha.
Musharaxiinta la sugayo inay Muqdisho soo galaan waxaa ka mid ah Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo ahaa Musharaxa kaliya ee illaa hadda sameeyay Olole doorasho gudo iyo dibad ah, maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalka Turkiga.
Sidoo kale Musharaxiinta la sugayo waxaa ka mid ah C/kariin Xuseen Guuleed Madaxweynihii hore ee Galmudug oo berri Muqdisho ku soo fool leh.
Musharaxiinta kala ah C/raxmaan C/shakuur iyo Daahir Maxamuud Geelle ayaa iyana jimcaha soo socda Muqdisho ku soo fool leh.
Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa maalmo ka hor soo galay Muqdisho, iyagoo dib uga soo laabtay safaro ay ku tageen dalalka Jabuuti, Kenya iyo Masar.
Isbuuca soo socda ayaa la filayaa in Musharaxiinta shir uga furmi Muqdisho, waxaana ay ku dhawaaqi doonaan Gole ay ku mideysan yihiin.
Ilo ku dhow dhow Mucaaradka ayaa sheegaya inay qaadici doonaan guddiga doorashada ee ay Xukuumadda soo magacawday, sidoo kale waxaa ay sameyn doonaan tallaabooyin barbar socota kuwa dowladdu u qaaday hannaanka doorashada.
Xukuumadda ayaa dhagaha ka fureysatay baaqyadii Musharaxiinta ee ahaa in wax ka bedel lagu sameeyo guddiyada la magacaabay, waxaana taa bedelkeed jawaab uga dhigtay inay xareysay Guddiyadii muranka ka taagnaa oo la dejiyay Hotelka Decale, halkaasoo tababaro ku saabsan howlaha doorashada ku qaadanayaan, inkastoo Guddiyadii laga sugayay Jubbaland iyo Puntland aanay soo gudbin oo ay wali kor u hayaan.
Previous articleDaahir Geelle “Dowladda taageerayaasheeda ayay Garsoorayaal nooga dhigtay”
Next articleJournalists, human rights groups protest against new French security bill banning police images